News - The Disneyland ပန်းခြံ၏ငြမ်းစီမံကိန်း
မနက်ဖြန် Shanghai Disneyland စီမံကိန်းpark.In ၏အနောက်တောင်ဘက်ထောင့်တွင်တည်ရှိသည်။ စီစဉ်ထားသောဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်းပြီးစီးရန်အတွင်းပိုင်းအခန်းကန့်နံရံကို MEP တပ်ဆင်စဉ်အတွင်းတစ်ချိန်တည်းတွင်ဆောက်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငါတို့မွေးစားringlock ငြမ်း. ငြမ်း၉ မီတာအမြင့်ရှိသောစစ်ဆင်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခု၊ birdleway တစ်ခုနှင့်၎င်းပတ်လည်ရှိစစ်ဆင်ရေးပလက်ဖောင်းများကိုပေးရန်လိုအပ်သည်။ အခန်းကန့်နံရံနှင့်အတွင်းနံရံကြားတွင် 30cm လည်ပတ်ရန်နေရာလိုအပ်သည်။ လှေကားများ၊ bridleway နှင့်အပန်းဖြေလမ်းများပြီးဆုံးသွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအဆောက်အအုံများကိုရှောင်ရှားရန်လိုအပ်သည်။ ဤစီမံကိန်း၏အရွယ်အစားမှာ ၉၅၀၀ м³ရှိပြီးဆောက်လုပ်ရေးကာလသည် ၁၅ ရက်ဖြစ်သည်။
ငါတို့အမျိုးအစား B ကိုသုံးတယ် လက်စွပ်သော့ခတ်ငြမ်း ဒီစီမံကိန်းအတွက်ငါတို့နှင့်အတူတူ သံမဏိပျဉ်ပြား, သံမဏိလှေကား နှင့်သံမဏိ toeboards ။
စံအကြားအကွာအဝေး 2m × 2m နှင့်ဒေါင်လိုက်အကွာ 1.5m ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသံမဏိပြားများကိုလုပ်ငန်းခွင်platformရိယာပေါ်တွင်လည်ပတ်သည့်ပလက်ဖောင်းအဖြစ်တင်ထားသည်။
၁။ ၉ မီတာမြင့်သောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကိုအမိုးဖြန်းခြင်းနှင့် MEP တပ်ဆင်ခြင်း။ အလျားလိုက်ဘားများပုံမှန်လည်ပတ်နေသည့်နေရာတွင်သံမဏိပြားများထားရှိသည်။
2. ပတ်ပတ်လည်သံမဏိရောင်ခြည်ကိုပက်ဖြန်းရန်လိုအပ်သည်, ဒါကြောင့်aroundရိယာတဝိုက်အလုပ်လုပ်အာကာသရှိလိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်သောနေရာကိုသံမဏိပြားများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
အတွင်းပိုင်းအခန်းကန့်နှင့်အကြားသင့်လျော်သောနေရာပေးခြင်း ဆောက်လုပ်ရေးပလက်ဖောင်း။ အခန်းကန့်နံရံ၏ဆောက်လုပ်ရေးကိုလုပ်ငန်းခွင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှစ်ခုအဖြစ်ခွဲထားသည်။ တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးပလက်ဖောင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းအခန်းကန့်အကြားကြီးမားသောနေရာလိုအပ်သည်။ ပန်းချီကားသည်အတွင်းပိုင်းအခန်းကန့်နှင့်တတ်နိုင်သမျှနီးကပ်စွာဆောက်လုပ်ရန်ပလက်ဖောင်းလိုအပ်သည်။ ဤဒေသတွင်မူမူလဆောက်လုပ်ရေးနှင့်နံရံအကြားကြီးမားသောကွာဟမှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သံမဏိပြားများတင်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည် (နံရံဘောင်ပုံဆွဲခြင်းကိုကြည့်ပါ) ဖြည့်စွက်ရန်သံမဏိပိုက်နှင့် coupler ကိုအသုံးပြုသည်။
ဒီareaရိယာ၌သံမဏိကော်လံ၏ပက်ဖြန်းခြင်းအလုပ်အတွက်မျက်နှာပြင်ပေးခြင်း။ ဒီဇိုင်းတွင်သံမဏိတိုင်၏လည်ပတ်မျက်နှာပြင်ကိုအထူးမဖော်ပြထားပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကစုပ်ယူသည့်အရာအဖြစ်အသုံးပြုရမည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငြမ်းပေါ်တွင်သံမဏိပိုက်၊ ခလုတ်နှင့်သစ်သားပြားများဖြင့်လည်ပတ်မျက်နှာပြင်ကိုတပ်ဆင်ခဲ့သည်။
၅။ မြေညီထပ်တွင် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်လှေကားထစ်နှစ်ခုပေးသည်။
ဘယ်တော့လဲ သစ်ပင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကိုတည်ဆောက်ထားပြီးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီသည်အနိမ့်အပန်းဖြေလမ်းကြောင်းကိုရှောင်ရှားသင့်ပြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းကန့်နံရံ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်နေရာလွတ်ထားသင့်သည်။ အတွင်းပိုင်းအခန်းကန့်နံရံကို ၇.၅ မီတာအမြင့်အထိတည်ဆောက်ထားပြီးအထက်ပိုင်းတွင်အချည်းနှီးသောအင်္ဂါကိုအသုံးပြုရန်နေရာရှိသည်။ စစ်ဆင်ရေးကုတ်ကိုစတုရန်းမိုင် ၄ မီတာသို့မဟုတ် ၆ မီတာသံမဏိအစိတ်အပိုင်းများ၊ ၁၆ သံမဏိနှင့်သံမဏိပိုက်များကိုအသုံးပြုသည်။
ဒိုင်းခွေအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုသောအခါနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ရှိသောအုတ်ခဲများကိုတင်းကျပ်သင့်ပြီးဒိုင်ခွက်အပိုင်းအစများမတည်မငြိမ်မဖြစ်စေရန်ဒိုင်းခွေအပိုင်းအစများ၏ ဦး တည်ချက်သို့လယ်ဂျာများကိုတပ်ဆင်သင့်သည်။